ငါစစ်ဝါရင့်ခွင့်နဲ့ကျွန်မ 51 တစ်နှစ် MIA, 25 နှစ်အတွင်းပြက္ခဒိန်နှစ်အတွင်းဝန်ဆောင်မှု၏အရှည်အငြိမ်းစားငါ, သင်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှဝါရင့်စဉ်းစားပေမယ့်အနေဖြင့်အကျိုးခံစားခွင့်မှလက်ျာဘက်ရပါမည် ...
အဘယ်အရာကိုစာရွက်စာတမ်းများအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူရဲ့ပင်စင်အပေါ်မှတ်ပုံတင်အတှကျလိုအပျနကွေသနညျး 1: ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းပင်စင်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့နိုင်ငံသားများ၏နယ်မြေအလောင်းတွေကိုအောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူလျှောက်လွှာတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်အခြားဝိသေသလက္ခဏာစာရွက်စာတမ်း, ...
အဘယ်သူသည်ဖက်ဒရယ်အရပ်ဘက်အစေခံကျွန်၏နံပါတ်ရည်ညွှန်း ??? FZ 79 ကြည့်ပါ။ အလုပ်အကိုင်? ကျေးဇူးပြု. : .. ရှေ့နေများစနစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ, ဆရာဝန်တွေ, စာရင်းကိုင်, etc, etc အဆိုပါအလုပ်အကိုင်ဘာမှဖြစ်နိုငျပါသညျ! အဓိကအရာတစ်ဦးနှင့်အတူလူတကြောင်း ...
ထိုသို့ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုသတ်မှတ်ပါတယ်တွက်ချက်အဖြစ်? ရလဒ်တစ်လူနေမှုလုပ်အားခ၏အရွယ်အစားကိုရောက်ရှိမပါဘူးဆိုရင်, မိသားစုစုစုပေါင်းဝင်ငွေ (ကလေးများအပါအဝင်) ကိုမိသားစုတစ်စုလုံးကို ယူ. မိသားစုဝင်များ၏အရေအတွက်အားဖြင့်အပိုင်းပိုင်းခွဲ ...
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ပါ ၀ င်သောမုဆိုးမ၏အကျိုးကျေးဇူးများကားအဘယ်နည်း။ အခမဲ့အိမ်ရာအတွက်အပါအ ၀ င် (လိုအပ်ပါက) ဤအကျိုးကျေးဇူးများမှာ - အနုပညာအဆိုအရ။ သေလွန်သူများ၏မုဆိုးမများအား“ စစ်ပြန်များနှင့် ပတ်သက်၍” ဖက်ဒရယ်ဥပဒေ ၂၁ ခု ...
သူတို့ရဲ့မိဘများ၏စောင့်ရှောက်မှုများအတွက်ဆေးရုံပါသလား ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်အဖြစ်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြန်လည်ထူထောင်ရေးဘို့လိုအပ်ကြောင်း၏အခြေခံပေါ်တွင်ဒဏ်ရာကြောင့်မိမိရောဂါအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ဝန်ထမ်းမှထုတ်ပေးစေခြင်းငှါ ...
အဘယ်အရာကိုဟောင်းများကို-အသက်အရွယ်ပင်စင်၏အစိတ်အပိုင်းများကို။ ဘယ်နှစ်ယောက် %% အခြေခံပညာနှင့်မည်မျှအာမခံ? Muscovites နေဆဲသင်သည် 55 ကိုမမှီသောသူမှန်လျှင်လူမှုရေး link ကိုစီမံကိန်းများ၏အုပ်ချုပ်ရေး၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကပိတ်ထားသည်ကိုလက်ခံရရှိ ...
1985 2001 နှစ်ပေါင်းပင်စင်လစာ၏အာမခံစိတျအပိုငျးမြား၏တွက်ချက်မှုအဘို့ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအတွက်ပျမ်းမျှအားအရွယ်အစားလစာ၏စားပွဲ၏လိပ်စာကဘာလဲ? Inta sayt.Uspehov ရှိပါတယ်။ 2000-2001gg ၏လစာအများဆုံးအချိုးရောက်ရှိဖို့ ... ။
အဘယ်သူသည်လူမှုရေးအကူအညီများကိုခွင့်ရှိသနည်း ကြိုဆိုပါတယ်! ငါရှုမြင်သုံးသပ်ကြနှင့်အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးစောင့်ရှောက်မှု 80 နှစ်ပေါင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုရလျှင်ငါလိပ်စာအကူအညီရနိုင်မလား? ငါမ ...
တစ်ဦးအထီးကျန်ပင်စင်စားကားအဘယ်သူနည်း အဘယ်သို့တဲ့လက်မှတ်ပင်စင်စားတကယ်အထီးကျန်ကြောင်းဖျောပွရသလော အိမ်သူအိမ်သားတစ်ဦးထံမှထုတ်ယူလူတစ်ဦးနိုင်ထားတဲ့တိုက်ခန်းမှာတစ်ဦးအထီးကျန်အနားယူကြောင်းအထောက်အထားမဖွစျနိုငျ ...
80 နှစ်ပေါင်းပြီးနောက်ပင်စင်ဖို့ဘာတစ်ဦးဖြည့်စွက်? ထိုအ 80 နှစ်ပေါင်း၌ငါ့ mom, 1440 ရူဘယ်, ပင်စင် 9194,10 ရူဘယ်ထပ်ပြောသည်။ သူတို့ထိုကဲ့သို့သောခု၏ယူဘယ်မှာရှိသနည်း , ကလေးစရိတ်အဖြစ်ကပြောပြ ...
အသက် ၅၀ တွင်မသန်စွမ်းကလေး၏မိခင်ကိုအနားယူရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ သင်သည် "မသန်စွမ်းကလေး" အမျိုးအစားတွင်ကလေးတစ် ဦး ကိုပင်စင်ယူသောအခါသတိပေးသင့်သည် (နှင့်သတိပေးခြင်းခံရသော်လည်းသင်မေ့ခဲ့သည်) ...
ဘယ်အချိန်မှာတစ်ဦးအသတ်မရှိမသန်စွမ်းပေးတော်မူ၏။ မသန်မစွမ်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့23 နှစ်ပေါင်းလျှင်။ 5-ကြိမ်မြောက်တစ်နှစ်တွင်။ 1: ထာဝရမသန်စွမ်းအဖွဲ့ကိုအောက်ပါကိစ္စရပ်များတွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အသက်ခြောက်ဆယ်နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကနေမသန်စွမ်းအထီး ...
သူမ၏ခင်ပွန်း၏အသေခံပြီးနောက်စစ်သား၏မုဆိုးမအပြည့်အဝ၌မိမိပင်စင်လက်ခံရရှိပါမည်နည်း ဖြစ်ကောင်းဘူး။ အဘယ်သူမျှမကအထူးအခွင့်ထူးရှိကြ၏လျှင်ခေါင်းစဉ်များအတွက်မရှိတော့ alas sanatornokurortnye ရရှိသောလိမ့်မည်။ ထိုအသင်မည်သို့ပြုမည် ...
လူမှုဝန်ထမ်း၏တာဝန်ကဘာလဲ? သင်ကန်ဆောင်မှုကိုသတ်မှတ်ပါတယ်စာချုပ်ရှိရမည်အခမဲ့ရွာများ၏စာရင်းအပေါ်အဘယ်အရာကိုတာဝန်နှင့်တာဝန်များဟုဆိုသည်။ သငျသညျပေးဆောင်သော။ ထိုအ ...
တစ်ဦးမသေဘဲကျန်ရစ်သူရဲ့ပင်စင်သာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူမှာပြည်နယ်ကနေအားလုံးငွေပေးချေမှုနှင့်အကူအညီပေးရေး။ အရွယ်အစားလစာနှင့်အဆင့်မြင့် breadwinner ၏အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပါသည်။ ဒါဟာပင်စင် fonde.Posle ဒီဇိုင်းသွားလာရင်းအတွက်ဖန်ဆင်းထားသည် ...
EDV နှင့် EBC ။ အိမ်ရာနှင့်အများပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးဆောင်ခြင်းအတွက် EBC (လစဉ်ငွေကြေးလျော်ကြေး) ။3အုပ်စု၏မသန်စွမ်းမှုအတွက် EDV (လစဉ်ငွေပေးချေမှု) E အရွယ်အစားသည် ၁၄၄၇.၉၅ ရူဘယ်ဖြစ်သည်။ "လူမှုရေးအထုပ်" ၏အရွယ်အစား - ...
ငါဆေးခန်းများတွင်အလုပ်လုပ်ဆေးခန်းမှပူးတွဲပါ။ ၏သင်တန်းငါတို့သည်သင်တို့၏အိမ်သို့တွဲဖို့တာဝန်ရှိကြောင်း။ ဒီလိုလူနာအပြည့်အဝ NS ခုနှစ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခံရဖို့လာ, ငါတို့သည်နေထိုင်ရာအရပျကိုသတ်မှတ်, ကွန်ပျူတာကသူတို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြ ...
သင်မော်စကိုလူမှုကတ်ပျောက်ဆုံးသွားလျှင်ဘာလုပ်သနည်း အဘယ်သို့ပြုသနည်း ဒဏ်ငွေပေးဆောင်? အဘယ်သူကိုသလော လက်ခံရရှိရှိရာ, သငျသညျသစ်တစ်ခုမဖြစ်စေသေးဒါဟာအဆင်ပြေမယ့်ခရီးသွားများအတွက်ယာယီဖြတ်သန်းပေးလာလိမ့်မယ်အဲဒီမှာ go ...
ယောဟနျသ Doe အမည်ရှိသူမ၏တံဆိပ်မှဖြည့်စွက်တံဆိပ် Vasily Chuikov အလုပ်သမားဝါရင့်ပိုင်ခွင့်, ထို့နောက်အမှုအရာချောချောမွေ့မွေ့သွားလိမ့်မည်ပါဘူး။ အလှူရှင်အဘို့ကိုထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်ဂုဏ်ပြု၏တံဆိပ်နှင့်အတူသို့မဟုတ် ...
53 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,256 စက္ကန့်ကျော် Generate ။